Ikhutshwe i-GIMP 2.99.4, ingxelo yesibini yokujonga kuqala ye-GIMP 3.0 | Ubunlog
Ikhutshwe i-GIMP 2.99.4, inguqulelo yesibini yokujonga kuqala ye-GIMP 3.0
Mva nje ukukhutshwa kwenguqulo entsha ye-GIMP 2.99.4 kwabhengezwa Inguqulelo oko kudweliswe njengohlobo lwesibini lwangaphambili lwe-GIMP 3.0 kwaye iyaqhubeka ngokukhula kokusebenza kwesebe elizinzileyo le-GIMP 3.0, apho utshintsho lwaya kwi-GTK3.
Inkxaso esemgangathweni yeWayland kunye ne-HiDPI yongezwa, isiseko sekhowudi sacocwa kakhulu, i-API entsha yokuphuhliswa kokunikezelwa kweeplagi ze-cache zacetyiswa kwaye zaphunyezwa, inkxaso eyongeziweyo yokukhethwa kwamanqanaba amaninzi kunye nokuhlela kwindawo yombala wokuqala.
1 I-GIMP 2.99.4 Iimpawu eziNtsha eziPhambili
1.1 Uyifaka njani i-GIMP kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
I-GIMP 2.99.4 Iimpawu eziNtsha eziPhambili
Xa kuthelekiswa nohlobo lwangaphambili lokulinga, ezi nguqu zilandelayo ziye zongezwa:
Umsebenzi sele wenziwe ukuphucula ukusebenziseka kwe-compact slider presentation isetyenziselwa ukumisela isihluzi kunye neeparameter zesixhobo. Umzekelo, iingxaki zokufaka amaxabiso kwibhodi yezitshixo zisonjululwe; Ngaphambili, ukucofa amanani kubangele ukuba ixabiso litshintshe, kwaye ngoku icwangcisa kuphela igalelo, ngelixa ucofa indawo engaphandle kwemida, njengangaphambili, ikhokelela kulungelelwaniso lwamaxabiso. Ukongeza, imiba yokutshintsha isikhombisi ngokusekwe kumxholo isonjululwe.
Ulungelelwaniso lomgangatho oshushu ohleliweyo (Shift + cofa kunye no-Ctrl + cofa), esetyenziselwa ukukhetha umaleko oluninzi (ukhetho olunemigca emininzi), olunokukhokelela ekugqobeni okanye ekususeni umaleko omnye ngempazamo. Ukuthintela iindlela ezinqamlezayo, abalawuli abakhethekileyo abasebenzisa iShift, iCtrl, okanye iShift-Ctrl ngoku bachukunyisiwe xa ubambe iqhosha le-Alt. cofa.
Incoko yababini "yeeNgeniso" icociwe, Kuhleli kuphela iiparameter zezixhobo ezixhumeke ngoku kwikhompyuter. Izixhobo ezibonakalayo kunye ne-XTEST zifihliwe. Endaweni yazo zonke izembe ezinokubakho zesitayile, kuphela zizembe ezixhaswe ngumlawuli eziboniswayo. Amagama ezembe ngoku ahambelana namagama anikwe ngumqhubi (umzekelo, endaweni ye "X" axis, "X Abs." Ingaboniswa). Ukuba kukho inkxaso ye-axis yokuthatha uxinzelelo kwithebhulethi, isixhobo ngokuzenzekelayo sisebenzisa imo yoxinzelelo lwe-accounting xa uhlela amagophe.
Se uhlengahlengise useto olungagqibekanga yintoni esebenzayo xa uqhagamshelo lwesixhobo esitsha lufunyenwe. Xa izixhobo zidityaniswe okokuqala, ukusetyenziswa kwazo kwizixhobo ezithile ngoku kunikwe amandla ngokwakhona.
Isixhobo esitsha sokulinga sokupenda sepeyinti songezwa esikuvumela ukuba ukhethe ngokuthe ngcembe indawo enemivumbo erhabaxa. Isixhobo sisekwe ekusetyenzisweni kwezahlulo ezikhethiweyo zealgorithm (igrafikhi) ukukhetha kuphela indawo yomdla.
Zongezwe Iifayile ezintsha ze-API zophuhliso lweplagi inxulumene nokuveliswa kwencoko yababini kunye nokulungiswa kwemethadatha, ukunciphisa kakhulu inani lekhowudi efunekayo ukuvelisa iingxoxo. I-PNG, JPEG, TIFF, kunye neFL-plug-ins zidluliselwe kwi-API entsha. Umzekelo, ukusebenzisa i-API entsha kwiJPEG iplagi kunciphise ubungakanani bekhowudi ngemigca engama-600.
Ukuqwalaselwa kwemisonto emininzi kunikezelwe kwiiplagi. Ipharamitha ebonelelwe kwisiguquli, esimisela inani lemisonto esetyenzisiweyo, yayisetyenziswa ngaphambili kuphela kwinkqubo ephambili kwaye ngoku iyafumaneka kwiiplagi ezinokumisela iiparameter zemisonto emininzi emiselweyo kuqwalaselo nge-gimp_get_num_processors () API.
Uyifaka njani i-GIMP kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Gimp Sisicelo esithandwayo kakhulu ukuze sifumaneke ngaphakathi koovimba Phantse lonke ulwabiwo lweLinux. Kodwa njengoko sisazi, uhlaziyo lwesicelo aluhlali lukhona kungekudala kwii-Ubuntu zokugcina, ke oku kungathatha iintsuku.
Nangona konke kungalahlekanga, ukusukela oko Abaphuhlisi beGimp basinika ufakelo lwesicelo sabo yiFlatpak.
Imfuneko yokuqala yokufaka i-Gimp kwi-Flatpak kukuba inkqubo yakho iyayixhasa.
Sele uqinisekile ukuba uneFlatpak efakiweyo kwinkqubo yethu, ngoku ewe singafaka iGimp ukusuka kwiFlatpak, senza oku ukwenza lo mthetho ulandelayo:
Nje ukuba ifakwe, ukuba awuyiboni kwimenyu, ungayiqhuba usebenzisa lo myalelo ulandelayo:
Ngoku ukuba sele unayo i-Gimp efakwe ngeFlppak kwaye ufuna ukuhlaziya kule intsha inguqulelo, Kufuneka basebenzise lo mthetho ulandelayo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » Imizobo » Ikhutshwe i-GIMP 2.99.4, inguqulelo yesibini yokujonga kuqala ye-GIMP 3.0
Kubuhlungu ukuba ayixhaswa okanye ixhaswe yinkampani eyomeleleyo ekuphuculeni kwayo.
I-Photoshop kufuneka yamkelwe ukuba ithatha iminyaka emininzi yophando, yiyo loo nto inje namhlanje, ikwabandakanya i-Raw AI kuphuhliso.
Kodwa ke, inyathelo ngenyathelo.
Pale Moon 28.17 iza kusombulula ingxaki yokusetyenziswa kweCPU kunye nokunye
Ventoy, yenza i-USB ebukhoma ukuqhuba imifanekiso ye-ISO